Madaxweyne Farmaajo oo shir ku casuumay maalinta Khamiista ah madaxda maamul-goboleedyada – Calanka.com
Madaxweyne Farmaajo oo shir ku casuumay maalinta Khamiista ah madaxda maamul-goboleedyada
in Gudaha — by admin —	September 8, 2020
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa shir ku Casuumay Madaxweyneyaasha dowlad Goboleedyada dalka ka jira iyo Maamulka Gobolka Banaadir.
Agaasimaha Warfaafinta Madaxtooyada Cabdinuur Maxamed Axmed oo qoraal soo saaray ayaa ku sheegay in Madaxweyne Farmaajo uu shir ku Casuumay Madaxda Maamul Goboleedyada, kaasi oo Khamiista soo socota ka furmaya Xarunta Madaxtooyada.
Agaasime Cabdinuur ayaa waxaa uu sheegay in shirkaas uu dhammeystirayo hanaanka doorashooyinka la filayo in dalka ay ka dhacaan dhammaandka sanadkaan 2020/2021, isla markaana shirkaas saldhig u yahay heshiiskii Dhuusamareeb-3.
“Waxaa Villa Soomaaliya ka furmaya Khamiis, 10ka Sebteembar shir ay u dhanyihiin Dowladda Federaalka, Dowlad Goboleedyada iyo Gobolka Banaadir, kaasoo lagu dhammeystirayo hanaanka doorashooyinka dalka, iyadoo uu saldhig u yahay heshiiskii Samareeb-3”, ayuu yiri Agaasime Cabdinuur.
Magaalada Muqdisho ayaa haatan waxaa ku sugan Madaxweyneyaasha dowlad Goboleedyada Jubbaland iyo Puntland, iyagoona kulan gaar ah la qaatay Madaxweyne Farmaajo, Mas’uuliyiin isugu jira Wasiiro iyo Xildhibaano, siyaasiin iyo xubno kale.
Dhinaca kale Madaxweyneyaasha Koonfur Galbeed, Hirshabeelle iyo Galmudug ayaa waxaa la filayaa in shir saddex geesood ah ku yeeshaan Magaalada Baydhabo, waxaana Maanta halkaas gaaray Madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare.
Maleeshiyaad ka tirsan al-Shabaab oo weerar ku qabsaday magaalada Balcad
SAWIRRO: Madaxweyne Farmaajo oo kulan la qaatay madaxda maamul-goboleedyada iyo gobolka Banaadir